Vaparidzi Vasingatombogutsikane neApple's Pfungwa yeApple News Kunyorera | IPhone nhau
Kana imwe yeanonyanya kutaurwa nezvenhau iri iyo inogona kuburitswa kweApple yekumhanyisa vhidhiyo sevhisi, ikozvino isu tinowana Nhau nezve iro runyerekupe nhau kunyorera sevhisi. Sevhisi yaizobatanidzwa muApple News uye iyo yaizobvumidza vaparidzi tipei zvemhando yepamusoro yekunyora zvemukati nemutengo wakaderera. Ehezve, zvinoita sekunge Apple haizove nyore kusvika pachibvumirano, vaparidzi vanoda mamwe mabhenefiti kupfuura iwo akarongedzerwa kubva kuCupertino ... Mushure mekusvetuka tinokupa zvese ruzivo rweiyi nyonganiso nyowani.
Sezviri pachena iyo Apple inoronga kuenda kuburikidza nekuita isu kubhadhara gumi emadhora pamwedzi, Apple yaizochengeta hafu yemari iyi uye yasara, imwe yacho 50%, yaizogoverwa pakati pevashambadzi vanoburitsa nhau dzavo kuburikidza neApple News iyi. Zviripachena kuti pano pane dambudziko, kana makambani rekodhi akapfuura nepakati, pamwe nemakambani zvese zvinotaurwa, vaparidzi havasi kuzozviitira nyore Apple. Ava vanofarirawo mhando dzakasiyana dzekunyorera dzinovhura dzakasiyana mhando yezvinyorwa kune vanyoreri. Nhaurirano idzo mumaonero angu dzinozopera muzvibvumirano nekuti kana paine mumwe munhu anofarira mamodheru emabhizimusi matsva, aya maNews Editors nekuda kwekudonha mukutengesa kwemapepa zvinyorwa.
Ndinofunga mune izvozvo zvinogoneka Keynote yaKurume 25 (Rangarira kuti haina kusimbiswa parizvino) tinogona kuona nhau nezveApple News. Keynote iyo yatinozoona zvigadzirwa zvitsva pakati payo zvingave zvitsva iPads, nyowani AirPods, uye nhau maererano nemasevhisi edhijitari ekambani yeapuro. Ngatirangarirei kuti masevhisi edhijitari igumbo rakakosha kune iyo Cupertino purofiti, uye kuwedzera kunyoreswa, sezvo zvese pazvinoratidzika kunge zvichinongedzera, pasina mubvunzo zvichawedzera mari yaCupertino. Ehe, isu tichaona kana vaparidzi, kana vanogovera kana paine vhidhiyo, vanopinda nepaburi kuti vatipe zvemhando yepamusoro izvo zvinoita kuti tide kunyorera kumasevhisi matsva aya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Vaparidzi havana kugutsikana zvizere neApple chikumbiro cheApple News kunyoreswa
Fortnite ndege uye zip mitsara inogamuchira shanduko mune nyowani yekuvandudza